Inkqubo wokucoca - Qiangzhong oomatshini Technology Technology Co., Ltd.
Ukugqitywa komphezulu weenkqubo zokubhobhoza ezingenasici ezingenasici zidlala indima ebaluleke kakhulu kwimveliso ekhuselekileyo yokutya kunye namayeza. Ukugqitywa komhlaba okuhle kuyahlambeka, kunciphisa ukukhula kwe-microbial, ukumelana nokubola, kunye nokususa ukungcola kwesinyithi. Ukuphucula umgangatho wombhobho wensimbi engenasici, oko kukuthi, ukuphucula umgangatho we-morphology kunye nesakhiwo se-morphological, nokunciphisa inani leendlela, iindlela eziqhelekileyo zokunyanga komhlaba zilandelayo:
1. Ukuguba nokukhazimla koomatshini (kubengezelwe ngoomatshini) kubizwa ngokuba yiMP
Ukuguba komphezulu okucokisekileyo ukuphucula uburhabaxa bomhlaba kunokubuphucula ubume bomphezulu ngaphandle kokuphucula ubume be-morphological, amanqanaba amandla, kunye nenani lemiqolo.
2. Ibuffed Polished (Buffed Polished) ekubhekiswa kuyo njenge-BP
Indlela esetyenziswa rhoqo kumzi mveliso wentsimbi engenasici ukukhulisa ukukhanya komphezulu, nangona ixabiso likaRa lingalunga kakhulu, iintanda ezininzi zinokujongwa phantsi kwemicroscope ye-electron, eyona ndawo ingaphezulu iyandiswa, kunye neferrite eyahlukileyo kunye nesakhiwo seMartensite. zilapha ekuhlaleni. Umphezulu ungcoliswe kukungcola okuninzi kunye namasuntswana esirhabaxa.
Ngenxa yokusetyenziswa kwepasta yokuncancisa, uninzi lweentsalela ezingacocekanga zigcinwa kwindawo yokudakumba kwaye ngokuthe ngcembe zikhutshwa kulwelo, zingcolisa ukutya.
3. Ifunxiwe okanye ifakwe emanzini (Pickled & Passivated / Chemished Polished) ebizwa ngokuba yi-AP ne-CP
Umbhobho ukhethiwe okanye ungadluli ngaphandle kokunyusa uburhabaxa bomhlaba, kodwa ususa amasuntswana ashiyekileyo kumphezulu kwaye anciphise amanqanaba amandla ngaphandle kokunciphisa inani leelayi. Uluhlu lokhuselo oludlulayo lwe chromium oxide lwenziwa kumphezulu wesinyithi ukukhusela intsimbi engenasici kwi-corrosion oxidation.
4. Electro wokucoca (Electro likhazimlisiwe) ekubhekiswa kuyo EP
Ngokucoca i-electrochemical, i-morphology yomphezulu kunye nolwakhiwo zinokuphuculwa kakhulu, kwaye owona mmandla ungancitshiswa. Umphezulu uvaliwe, ungqindilili chrome oxide bhanyabhanya ngamandla asondeleyo kwinqanaba eliqhelekileyo lengxubevange kunye nemithombo yeendaba iyancitshiswa.
Ukufezekisa isiphumo esigqibeleleyo sombane, ipolishi yoomatshini kufuneka ibe kukucoca irabras.
Kufuneka iqatshelwe ukuba ixabiso elifanayo likaRa alibonisi unyango olunye lomphezulu.